The mhando muripo nzira wokurarama chikwereti
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ The mhando muripo nzira wokurarama chikwereti
Wokurarama chikwereti, zvisinei nemari kana nhamba kuti kushandisa, asi rinotarisirwa kubhadhara imwe mari kuti yakatogadzirwa, muripo nzira pane mhando dzakawanda. Kana kadhi chikumbiro, panguva kushandiswa, uyewo vanogona ikozvino kusarudzwa pashure kushandiswa.
pre-kunyoresa mhando ribonucleic
Inonyanya iri, nenzira anonzi vakararama kunyoresa mhando wokurarama zvikwereti, ndiyo mhando inyoreswe iri wokurarama mbiri panguva kadhi chikumbiro. Kuona rendi mari panguva chibvumirano kadhi, izvozvo akapfuudza yakanatsa mari miniti acharamba mari mu yakatevera. Rave chinotaurwa pana kadhi kambani huru. Kana kushandiswa huwandu idukusa 200,000 Yen, yakadereresa Withdrawals zvinogona kutaurwa kubva 5000 Yen, unogona tsanangurai kusvika 100,000 Yen. Kana iwe siya wakasarudza izvi muripo nzira, kunyange kana iwe tsanangurai 1-nguva mubhadharo panguva yacho kunotenga zvichanzi rwoga kushandurwa kuti wokurarama chikwereti.
uyewo pashure, mumakore achangopfuura nemasangano chikwereti kambani wakatangwa, panewo muripo mhando kuti anonzi ari "ribonucleic gare gare". Izvi mushure kunotenga inzira kushandura wokurarama chikwereti zvakabayirwa mbiri kambani runhare kana Indaneti. Kushandisa kunotenga, sezvo zvichiita kuti achinje yavo chete zvaunoda mune wokurarama chikwereti, unogona nyore kushandisa. In hurongwa kuti makambani makuru kunge vakasuma, tinogona kushandisa zita kushandiswa mushure nokuchinja mhando wokurarama zvikwereti, asi zvose zvakafanana.
wokurarama chikwereti basa kadhi
Uyezve, vakawanda vakawanda kadhi iri wokurarama chikwereti basa iri kwemasanga, kunyange munhu ane chibvumirano muna inotevera mwedzi bundu Muchidimbu, yava kukwanisa kusarudza wokurarama zvikwereti pachitoro iwe. Payment Nzira inonzi pamusoro-the-pakaunda wokurarama zvikwereti, panguva kunotenga nenguva vatengesi pamwe nokurera wokurarama zvikwereti, unogona tsanangurai neimwe nyaya wokurarama chikwereti.
Kana chiziviso nenguva kadhi kushandiswa se "iri wokurarama zvikwereti", uye mutengo zvaida kuti kunotenga mu wokurarama chikwereti. Asi pane kuti nzira vakadai se chaiyo kuti rendi mari inodiwa, nekuti pane gungano neimwe kadhi kambani, chisimbiso Yaungada kuchengeta.
bhuku | wokurarama chikwereti basa kadhi wakakurumbira kure mazita
wokurarama zvikwereti chete kadhi
Uyewo, kune avo vaitungamirira kambani akatanga kutengesa mumakore achangopfuura, pane chinhu inonzi ribonucleic vakazvitsaurira kadhi. In kadhi kuti unyanzvi mune wokurarama chikwereti, hazvigoni kushandiswa nevamwe pane kubhadhara yakanatsa ribonucleic panguva kondirakiti. Kana iri rinotevera mwedzi mukanyiwa pakuverengwa nerimwe kunotenga, haukwanisi kuchinja kana kuti wokurarama zvikwereti.
Kana uri pamwedzi kusarudza mari kuti ishandiswe munyika kadhi, iwe unenge zvichida vanofanira kuumba kadhi kuti anogona kubhadhara ribonucleic. Vazhinji kadhi, kunyange kana chibvumirano muna inotevera mwedzi bundu Muchidimbu, zvinokwanisika kuchinja mune wokurarama chikwereti. The nzira iri nyore, inowanika pamambure pasina pamusoro-the-yemabhuku. Uyezve, unogona Dzinochinjawo runhare kuti vatengi rutsigiro. Uyezve, kana ari wokurarama zvikwereti nerimwe kunotenga, unofanira kukwanisa kuva ichi kana kuti zvakanyatsonanga mumwedzi inotevera mukanyiwa-pakuverengwa muripo.
Unogonawo kutaridzwa nguva chete wokurarama chikwereti kuti kunotenga ndiyo zvakawanda kwezana mwaka. Uyezve, yava kubvumira prepayment mu zhinji kadhi.
bhuku | nyaya huru yevanhu payakatora wokurarama zvikwereti chete kadhi akakurumbira kure List
upenyu hwako uye kuchinja pfungwa Specification
muhoro sei kushandisa maererano purogiramu mari, huwandu asi zvishoma muna pamwedzi kubhadhara wainyatsotaura pachine, zvaunogona kubhadhara mberi purogiramu kubhadhara yakawanda mwedzi. Wokurarama chikwereti ari zvichienderana kushandiswa, ndiwo mudziyo chinogona kubatsira muupenyu. .
muhoro sei kushandisa maererano purogiramu mari, huwandu asi zvishoma muna pamwedzi kubhadhara wainyatsotaura pachine, zvaunogona kubhadhara mberi purogiramu kubhadhara yakawanda mwedzi. Wokurarama chikwereti ari zvichienderana kushandiswa, ndiwo mudziyo chinogona kubatsira muupenyu. Wati raanotaura huwandu iri pamwedzi kubhadhara, unogona kubhadhara mberi purogiramu kubhadhara yakawanda mwedzi. Wokurarama chikwereti ari zvichienderana kushandiswa, ndiwo mudziyo chinogona kubatsira muupenyu. Wati raanotaura huwandu iri pamwedzi kubhadhara, unogona kubhadhara mberi purogiramu kubhadhara yakawanda mwedzi. Wokurarama chikwereti ari zvichienderana kushandiswa, ndiwo mudziyo chinogona kubatsira muupenyu.